23:23 Iyure yesipili: Ingelosi yakho ekuLondolozayo ikhanyisela uBomi bakho - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
23:23 Iyure yesipili: Ingelosi yakho ekuLondolozayo ikhanyisela uBomi bakho
Iiyure zesipili ziyindlela yokuba ingelosi yakho ekugcinayo idlulise umyalezo kuwe. Fumanisa ukuba yeyiphi intsingiselo efihliweyo emva kweyure yesipili engama-23: 23 kwaye ikuchaphazela njani.
Ukuba uya kulala emva kwexesha, ngoko mhlawumbi sele ulibonile ixesha 23:23 ngaphambi kokuba uye kulala. Ukubona iyure yesipili ngolu hlobo ayisiyongxaki nje, yinyani yengelosi yakho ekugcinayo ukuthumela umyalezo kuwe. Kubalulekile ke ngoko ukuba uyazi intsingiselo emva kweyure yesipili engama-23: 23. Ngethamsanqa kuwe, silapha ukuveza ukuba eli xesha linokuyichaphazela njani indlela yakho kwaye litshintshe izinto zakho.
Ukubona iyure yesipili eyi-23: 23 kuyakukhuthaza ukuba uqaphele okungqongileyo.
Kuhlala kusimangalisa, nkqu umdla , ubona iyure yesipili njenge-23: 23. Elinye lala maxesha linentsingiselo kunye umyalezo ovela kwi ingelosi yokukhokhela . Ukuba uhlala ubona ixesha elingu-23: 23, siza kukuxelela ukuba kuthetha ntoni oku.
ungajongana njani nendoda yegemini
23:23 Iiyure zesipili intsingiselo: mamela
Yonke into ihamba kakuhle ebomini bakho, kodwa ukuba uhlala ubona ixesha 23:23 emva koko kufuneka uvule amehlo akho . Jika uye kwiqabane lakho, bayakudinga kwaye kuya kufuneka umamele into abaya kuyithetha . Ikamva lakho kunye liya kuthi emva koko lizaliswe lulonwabo.
Iyure yesipili 23: 23 ifuzisela:
Ixesha 23:23 inokuqaqambisa intshukumo yexesha elizayo, nokuba yeyomsebenzi okanye yolonwabo. Ngenxa yokukwazi kwakho ukumamela kwaye ube nobubele, abanye abantu bathanda ukuzityand 'igila kuwe bakuxelele iingxaki kunye neemfihlo zabo.
23:23 Iyure yesipili, qhubeka ukholelwa kuwe
Kufuneka ube nesibindi mva nje . Ngoku umanyelwe kwaye uhlonitshwe, kwaye indlela yakho iya icaca . Unempumelelo eninzi, ke musa ukuzithandabuza. Ingelosi yakho isakholelwa kuwe kwaye kufuneka uzithembe. Ingelosi yakho ekugcinayo ikukhokela kwaye ikuxhase, ke ungakhathazeki!
23:23, efuzisela inani u-46 kwinani
Kutheni 46? Ngenxa yokuba 23 + 23 = 46
Inani elingama-46 likubeka kwisithuba se- impumelelo yakho , kodwa impumelelo inokuba nzima ngakumbi ukuyiphumeza kwisebe lothando. Gwema isimilo esingafanelekanga kwaye ungavumeli ubuqhetseba bakho kunye neminqweno yakho ikukhokele ekwenzeni ukhetho olubi .
Bala ingelosi yam
Fumana inombolo yakho yengelosi
U-Lauviah, iNgelosi yoMgcini yeZityhilelo kunye namaphupha
Kutheni Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi Kuxhaphake Kangaka? Izizathu ezi-7 zokuba kutheni
Kutheni ndiqhubeka ndibona i-666
intsingiselo yokubala ngamanani ayi-777
intsingiselo yokomoya yeekati
Ukuhambelana kwe-capricorn ne-virgo
uncedo lokomoya kuxinzelelo